कोरियाली प्रसाधन सामग्री: प्रसाधन सामग्रीहरूको समीक्षा। कोरियाली प्रसाधन सामग्री: एक समीक्षा
ओरिएंटल महिलाहरूको जवान र सुन्दरताको संधै ईर्ष्याको वस्तु हो। कम्तीमा कोरियन लिनुहोस्, जुन 25, 35 र 55 मा अविश्वसनीय ताजा हुन सक्छ। कुरा भनेको कोरियाले शताब्दी पुरानो परम्पराहरूको बारेमा बिर्सनु हुँदैन। प्रौद्योगिकी को सक्रिय विकास को बावजूद यस अद्भुत देश को निवासियों, कृत्रिम additives को बिना प्राकृतिक उत्पादनहरु को पसंद गर्छन।
विशेष गर्वलाई आत्म-हेरविचारको संस्कृति हो। प्रकृति को जादू हामी "कोरियाई प्रसाधन सामग्री" वाक्यांश सुनाउँदा पहिलो सङ्गठन हो। Cosmetologists र छलफलहरूको समीक्षा उच्च गुणस्तर र न्यायिक अपेक्षाहरूको बारेमा बोल्छ। कोरियाई प्रसाधन सामग्रीको के हो भनेर चिन्नुहोस्।
शुरुवातका लागि जानकारी
एशियाई प्रसाधन सामग्री, जसको समीक्षाहरू मात्र केही वर्ष पहिले सक्रिय रूपमा देखा पर्न थाले, रुसहरूमा लोकप्रियता प्राप्त गर्न। सायद हामी युरोपियन र अमेरिकन ब्रान्डहरूको दबाबबाट टाढा थियौं, जुन हामीलाई दैनिक पत्रिकामा पत्रिका र टिभीको साथ आक्रमण गर्दछ।
उचित सेक्सको प्रतिनिधि - परिवर्तनयोग्य स्वभाव, हामी सधैँ केहि नयाँ प्रयास गर्न चाहन्छौं। तथापि, पारंपरिक कस्मेटिक्स र सुगंध स्टोरहरू मा कोरियाली निर्माताहरूबाट उत्पादनहरू खोज्न असम्भव छ। रूसी बजारमा, यो मात्र वेबमा प्रतिनिधित्व गरिएको छ।
समीक्षा र एशियाई कस्मेटिक्सका छलफलहरूले विश्वसनीय विक्रेताहरू छनौट गर्न मद्दत गर्नेछ। निस्सन्देह, यसले केही समय लिन सक्छ, तर यो धेरै कारणहरूको लागि प्रयास गर्न लायक छ।
एक विशेष दृष्टिकोण। दुर्भाग्यवश, युरोप र अमेरिकाका थुप्रै निर्माताहरूले सजावटी प्रसाधन सामग्री र हेरविचार उत्पादनहरू स्पष्ट रूपमा साझेदारी गर्छन्। सामान्य पाउडर, सम्भवतः, मोटो चमक र मात्र देखि छुट हुनेछ, र आवाज आवृत्ति क्रीमले रक्षा गर्न सक्दैन, उदाहरणका लागि, एक पराबैंगनी प्रभावबाट।
कोरियालीहरूले विश्वास गर्छन् कि तपाईं हेरविचार र सजावटी प्रसाधन सामग्री साझा गर्न सक्नुहुन्न। सबै उत्पादनहरू औषधि सामग्रीको आधारमा सिर्जना गरिएका छन्: अङ्कहरू, अङ्कहरू, सारसहरू र तेलहरू।
2. उन्नत विकास र परम्पराहरू। धेरै वर्षको लागि, कोरिया उन्नत वैज्ञानिक प्रविधिहरु को क्षेत्र मा एक नेता रहेको छ, जसमध्ये धेरै प्रयोग गरिन्छ, सहित, सुन्दर उत्पादन को निर्माण मा। गहिरो चयन र निष्कर्षणको अनियमित तरिका, साथै आणविक संश्लेषण, बहुमूल्य प्राकृतिक घटकहरूको गुणहरूलाई संरक्षण गर्न अनुमति दिन्छ। प्रमुख कोरियाली ब्रान्डहरूको स्मार्ट प्रसाधन सामग्री लामो समयसम्म जनावरहरूमा परीक्षण गरिएको छैन।
साथै, कोरियालीहरूलाई युवा र सुन्दरताको रहस्यलाई ध्यानपूर्वक संरक्षण गर्नुहोस्। सदियों पुरानो व्यञ्जनहरू उन्नत विकाससँग मिलेर एक साँच्चै अनौठो परिणाम दिन्छ।
3. सुरक्षा, दक्षता र उच्च गुणस्तर कोरियाली प्रसाधन सामग्रीको विशेषता हो भनेर तीन परिभाषाहरू हुन्। "को लागि" अर्को महत्त्वपूर्ण मूल्य हो। निर्माता व्यावहारिक रूपमा विज्ञापनमा पैसा खर्च गर्दैन, र त्यसैले, यसले लागत मूल्यलाई असर गर्दैन। आफैंलाई अनुमति दिनुहोस् सुन्दरता-उपन्यासहरू महिला र महिलाहरु, एक सानो आय संग पनि।
दैनिक सुन्दरता अनुष्ठान
एक कोरियाई महिलाको हेरचाह धेरै समय र ऊर्जा दिइएको छ। यो विभिन्न माध्यमको प्रयोगको साथ एक पुरा अनुष्ठान हो, जुन, कदम जस्तै, अर्को पछि एक पछि पछ्याउनु पर्छ। केवल पूर्ण बल मा अनुक्रम को स्थिरता भने, कोरियाई प्रसाधन सामाग्री काम गर्न शुरू हुनेछ। कस्मेटोजिस्टहरूको समीक्षालाई उनीहरूको आवेदनको सबै सार्थक र सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्न सल्लाह दिएका छन् - यो हामी अब गर्नेछौं।
बिहानको हेरविचार लामो समय लाग्ने हुनेछ:
- पहिलो चरण छाला सफा गर्नु हो। यो गर्न, फोम, एक विशेष क्रीम-साबुन वा पेस्ट उपयुक्त छ। धुलाई पछि, यो पेपर तौलियासँग गीलो प्राप्त गर्न उत्तम हो।
त्यसपछि ट्रोनिक लागू गर्नुहोस्। एशियन प्रसाधन सामग्री (कोरियन प्रसाधन सामग्री) हामीले प्रयोग गर्न प्रयोग गर्नुभन्दा फरक फरक छ। यस अवस्थामा, टोनिकले छालाको चिसो पिउने काम गर्दछ, पूर्णतया भिन्न स्थिरता छ र कपास पैड बिना लागू हुन्छ।
फोम को उपयोग पछि छाला को नमी को कम मात्रा मा कम हुन्छ, यसैले अतिरिक्त हेरचाह को बिना तपाईं यसलाई सुखाने को जोखिम को जोखिम मा छ। टनिकिक (अन्य नाम बोस्टर, छाला पानी, स्टार्टर, छाला बेलैंर, टोनर) सफा गर्छ, छालाको पानीको सन्तुलन normalize र क्रीम को लागि पारगम्यता सुधार। यो अनुहारमा धुलाई पछि तुरुन्तै हल्का पट्याउने आचरणहरू लागु हुन्छ।
- अर्को चरणमा हामीले सावधानी अपनाएको छ - ampoules, serums र एक संकीर्ण फोकस को सार भागहरु। उदाहरणका लागि, झन् झन्डाहरू, ब्लीच वर्णक स्पॉट वा सेलहरू पुनःस्थापना गर्न। समस्या क्षेत्रहरूमा मात्र लागू गरियो।
- अब यो दिन क्रीमको लागि समय हो। कोरियाली प्रसाधन सामाग्री, को बारे मा व्यापक रूपमा वेब मा प्रतिनिधित्व को बारे मा समीक्षा, छाला प्रकार र सीजन को आधार मा उत्पादनहरु को एक विशाल चयन प्रदान गर्दछ।
गर्मीमा, कस्मेटोजिस्टहरूलाई हल्का बनावटहरू - गील्स, लोशन वा इम्युसन प्रयोग गर्न सल्लाह दिइएको छ। यी एउटै सौन्दर्य उत्पादन तेल छालाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ, र सुत्नका लागि उत्तम पोषणयुक्त क्रीम हो।
- अन्तिम चरणमा, कोरियनहरूले प्रिमर (आधार), बीबी क्रीम वा नींव प्रयोग गरेर मेकअप बनाउँछ र परिणाम निर्धारण गर्न पाउडर पनि पाउछन्। प्राय: यी फ्यानहरू अतिरिक्त रूपमा छालालाई पराबैंगनी विकिरणको प्रभावबाट जोगाउँछन्।
मेगोलोलिसमा हाम्रो छाला गम्भीर तनावको विषय हो, त्यसैले यो कस्मेटिक्स ठीक तरिकाले धोका गर्नु आवश्यक छ:
- मेकअप हटाउनको लागि उत्तम साधन हाइड्रोफिलिक तेल हो। छाला र मालिशमा सानो रकम लागू गर्नुहोस्, त्यसपछि सानो पानी थप्नुहोस् र फेरि आफ्नो अनुहारलाई मालिश गर्नुहोस्, र त्यसपछि पानी संग धो।
- त्यसोभए अन्ततः सफा फोमको साथ मेकअप र तेलको बाँकी छालाबाट हटाउन आवश्यक छ।
- तेस्रो चरण चिसोको प्रकारको आधारमा toning र थप हेरविचार हुन्छ।
- र अन्तमा तपाईंले हप्तामा रात मास्क धेरै पटक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ग्राहकहरू अनुसार यी रकमहरू, तिनीहरूका लागि अधिक उपयुक्त छन् जुन रातमा जागिर रहन्छन्।
थुप्रै रूसीहरू एशियाका गुणस्तर प्रसाधन सामग्रीहरू राम्रै राम्ररी जान्छन्। सच्चा समीक्षाहरू पहिले नै आवेदन बाट उल्लेखनीय परिणामहरूको बारेमा बोल्नुहोस्। वास्तवमा, निलो छाला, एक स्वस्थ रंग र झुकाव गर्न सक्नुहुन्न तर कृपया हामीलाई। यद्यपि, त्यहाँ नकारात्मक आकलन पनि छन्।
कोरियाई प्रसाधन सामग्रीमा सबै खराब आकलन र समीक्षाहरूको संक्षेप गर्दै त्यहाँ दुईवटा मुख्य कारणहरू छन्।
गलत अनुप्रयोग। हामीले पहिले नै भन्यौ भने, केहि परिचित उपकरणहरुको प्रयोग परिचित नामहरु संग एक अधिक सावधान दृष्टिकोण को आवश्यकता छ। यदि तपाईं wadded डिस्क मा एक टनिकिक र आफ्नो अनुहार पोइन्ट गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सनसनीहरू सबैभन्दा सुन्दर हुनेछैन। अर्को उदाहरण हाइड्रोफिलिक तेल हो। यो एक छालाको लागि उपयुक्त एकमात्र उपाय हो। यस अवस्थामा तेलको अनुपस्थितिको बारेमा तेलको अभावको बारेमा पुरानो नियम पनि काम गर्दैन। "हाइड्रोफिलिक तेलको" साइड इफेक्ट "पिरोला र आँखाहरूमा वृद्धि हो। यसको अतिरिक्त, बीबी क्रीम हटाउन यो उपाय अपरिहार्य छ।
नकली। इन्सुलेशन र पेइंगिंग परिणाम न केवल अनुचित अनुप्रयोग को परिणाम हुन सक्छ। यो प्रतिक्रियाले कम गुणस्तरको उत्पादनलाई संकेत गर्दछ। चिनियाँ स्वामीहरूको क्षमताको बारेमा हामीले धेरै कुरा सुनेका छौं, र अवैध प्रतिलिपि बनाउन अर्को वस्तु कोरियन प्रसाधन सामग्री थियो। "मिजोन", "टोन मोली", "स्कुल फूड" - यस सम्बन्धमा सबैभन्दा लोकप्रिय, ब्रान्डहरू। प्रसिद्ध "AliExpress" पोर्टलमा तपाईले सस्तो प्रस्तावहरूमा सैकर प्रस्तावहरू पाउनुहुनेछ, तर कसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन?
Snails को लागि फैशन
लगभग पाँच वर्षको लागि, कोरियामा एक वास्तविक सडक उछाल शुरु भयो। युरोपियन वैज्ञानिकहरूको विकासको लागि धन्यवाद, यी ढिलो प्राणीहरूको रहस्यको अनोखा गुणहरू पत्ता लगाइएका थिए - कायाकल्प र पुनरुत्थान र साथमा मुर्ति विरुद्धको लडाइँ।
त्यसपछि मुख्य विषयवस्तु "कोरियाली प्रसाधन सामग्री" थियो, "के, कहां र कसरी," र हजारौं केटीहरु र महिलाहरु को एक बोतलहरुको जादुई क्रीम किन्न को सपना देखा। यो माग यति ठूलो थियो कि तपाईंले दुई वा तीन महिनाको लागि किताब गर्न थाल्नुभयो। सौभाग्य देखि, समय संग, लगभग सबै कोरियाली ब्रान्डहरु आफ्नो स्ट्रीट संग्रह जारी गरे।
यसैले, कस्मेटिक्स को विशेषता के हो? घोंघा माईकस प्रसाधन सामाग्री मा सबै भन्दा पुराना घटक हो। स्रोतका अनुसार, हिप्पोक्रेटले छालामा जलनको उपचारको लागि दूध र विषाणु माइक्रसको आधारमा एक इन्टर्न प्रयोग गर्यो।
स्नर्सको लागि विशेष गोप्य प्रक्रिया प्राप्त गर्ने प्रक्रिया खतरनाक छैन। चिन्ता नगर्नुहोस् - कुनै प्राणीले तपाईंको सुन्दरताको लागि पीडा ल्याउनेछैन।
कास्मेटिक्स "स्नेल" कोरियाली
स्नेल मकस प्रयोग गरेर कस्मेटिक्सहरूको समीक्षा हामीलाई अद्भुत परिणामहरूको बारे बताउँछ। सबै भन्दा धेरै उमेर मा यस उमेर मा लगभग 30 वर्ष को आयु मा उचित सेक्स प्रतिनिधि को माध्यम ले कार्रवाई देखि संतुष्ट हो यो धीरे - धीरे झुर्रियों को बिरुद्ध लडना शुरू गर्न को लागि आवश्यक छ।
आउनुहोस् कि स्नेल मकसमा कुन उत्पादनहरू सक्षम छन् भनेर हेर्नुहोस्। यी हुन्:
घातक र सूजनहरु को उपचार।
घोडाहरू, खिच्नुहोस् र निशानहरूको उपचार।
जस्तै हामीले पहिले नै उल्लेख गरेका छौं, आज कोरियाको लगभग सबै प्रमुख निर्माताहरूले "सडक" कस्मेटिक रेखाहरू विकास गरेका छन्। यी साधनहरू बीचको मुख्य भिन्नता सङ्कलनको स्रावको एकाग्रता हो - जादुई घटकको सामग्रीको उच्च उच्च, छालामा यसको प्रभावकारी प्रभावकारी हुनेछ। यसैले, एक क्रीम को लागि एक अपेक्षाकृत कम मूल्य 90% को निकासी एकाग्रता संग तुरुन्त अलर्ट गर्नु पर्छ।
"घोंसले" कस्मेटिक्स № 1
टोनी मोली - गुणस्तर कोरियाई प्रसाधन सामग्री। कस्मेटोलोजीहरूको समीक्षा सडक स्ट्रीटको लाइनमा प्राथमिकता दिन्छन्, जसरी विभिन्न प्रकारका प्रतियोगीहरूको उत्पादन भन्दा बढी छ। फोम धोने, अनुहार र हात क्यान्सर, कपडे मास्क र तीव्र मर्मत लाइभ स्नेल सीरीजका अन्य अनूठा घटनाहरु आश्चर्य गर्न सक्छन्।
एक स्न्याप गोप्यमा धेरै अनूठा घटकहरू छन्:
- chitosan नमी बनाए राख्छ;
- एटान्टिओनले ऊतकको पुनरुत्थान बढाउँछ , छालालाई सुचारू र लोच दिन्छ।
- एलास्टिन र कोलाजनले अक्सिजनसँग छाला संतृप्त र नमीको वाष्पीकरण रोक्न;
भिटामिन बी 12 ले पराबैंगनी प्रकाशको प्रभाव हटाउन काम गर्दछ, छाला सफा गर्छ र एलर्जी प्रतिक्रियाहरू हटाउँछ;
भिटामिन ए कोलेजन को संश्लेषण को उत्तेजित गर्दछ र विरोधी बुढ़ापे को प्रभाव को बढावा गर्दछ, र पनि मुँहासे देखि लडने मा मदद गर्दछ;
- ग्लिसकोलिक एसिडले पोषक तत्वहरूको प्रवेशमा सुधार गर्दछ र भित्ताका नलिकाहरू सफा गर्छ।
यसको अतिरिक्त, "स्नेल" सीरीज टोनी मोली को सामाग्री को बीच मा घोषित गरिएको छ: चूम, एडेलवे एल्पाइन, मरिच पेड, सेन्टेला एशियाई र पिउलाटेल कोरियाई, मक्खन, कुखुरा, मैकडेमेनिया र अक्लिपिप्टिपस को अर्क।
लोकप्रियताको उचाईमा धेरै वर्षसम्म BB-क्रीम हो। यो सुन्दर उपकरण हरेक कस्मेटिक थलमा हुनुपर्दछ। सूजन, पुनरुत्थान र हाइड्रेशनबाट संरक्षण - यो कल्पना गर्न गाह्रो छ कि यो सबै एक क्रीम प्रदान गर्न सक्छ।
BB या ब्लेमिश बाल्म "चिकित्सक मास्किंग" को रूप मा अनुवाद गर्छन। उपचार को लागि जर्मन कस्मेटोजिस्टहरु द्वारा प्लास्टिक सर्जरी को बहाव द्वारा बनाईएको थियो। क्रीमले यस्तो आश्चर्यजनक परिणाम देखाएको छ कि यो विचार कोरियालीका अन्य निर्माताहरु द्वारा उठाएको थियो।
आईरेकोन्डेन्ड वा ओट्ज्भिक पोर्टलहरूमा, जहाँ साधारण ग्राहकहरूले आफ्ना विचार र व्यक्तिगत अनुभवहरू साझा गर्छन्, त्यहाँ पनि फरक भागहरू छन्: "कोरियाली प्रसाधन सामग्री, समीक्षाहरू", "बीबीक्रीम, समीक्षाहरू।" यहाँ तपाईं सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्डहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र बीबी-क्रीम चयन गर्न सल्लाह प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यो दिलचस्प छ कि क्रीम को छाया पाउडर वा टोनल आधारको रूपमा महत्त्वपूर्ण छैन। गुणवत्ता BB-क्रीम छालाको साथमा विलय गर्दछ, विश्वसनीय रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण कमजोरीहरू (लालिपन, अनियमितता, मुँहासे) र प्राकृतिक सुन्दरतालाई जोड दिन्छ।
कोरियाली बीबी-क्यान्सरको सुविधा
कोरियाली प्रसाधन सामग्री, हामी समीक्षामा समीक्षा गर्छौं, मुख्य रूपमा एशियाई सुन्दरताहरूमा केन्द्रित छ। संसारको यो भागमा त्यहाँ सुन्दरताका आफ्नै स्तरहरू छन्, प्रायः युरोपेलीहरूसँग सम्बद्ध छैनन्।
कोरियनहरूको लागि, सुन्दरताको आदर्श पोर्सेली चेहरा हो। आदर्श चिकनी, लोचदार र स्वस्थ छाला, एक विशेष चमक संग - प्रत्येक केटी र महिला को सपनाहरु को सीमा। मैट छाला, जसको लागि हामी यति प्रयास गर्दछौं, यसको विपरीत, थकान र wilting संग सम्बन्धित छ।
वास्तवमा कोरियाली निर्माताहरूबाट सबै बीबी क्रीमले छालामा विशेष चलनको प्रतीक हो। तथापि, केही घण्टा पछि, यस प्रभावले घृणित मोटा चमकमा परिणत गर्न सक्छ, विशेष गरी टी-जोनमा।
दुर्भाग्यवश, मोटो चमक को उपस्थिति को रोक्न लगभग असंभव छ, र कुनै पनि अर्थ मा तपाईं दिन मा एक म्याट छाला को गारंटी दिन सक्दैन। तर अझै पनि एक बाटो हो - ग्याँस पाइप प्रयोग गर्नुहोस्।
अनुहार सफा गर्नु स्वस्थ छालाको मुख्य चरण हो। निष्पक्ष यौन सम्बन्धका केही प्रतिनिधिहरू पनि जोसिलो हुन्छन् र सबै प्रकारका पिक्राहरू वा स्क्रबहरू बिना हेरविचारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। प्रायः प्राय: यी उत्पादनहरूमा कणहरू हुन्छन् जुन छालालाई चोट पुर्याउँदछ र पिरोलिन्छ। केही समयमा यस्ता फाईदाहरूको अनुचित प्रयोगको समस्याको सामना गर्न पनि कोरियाई प्रसाधन सामग्री पनि हुन सक्दैन। भान्साहरु को समीक्षा एक अधिक नाजुक विकल्प को सिफारिश - छीलने रोल।
पिलिङ-स्केटिङले धेरै वर्षको कार्यात्मक विशेषताहरूको कारणले धेरै वर्षको लागि अविश्वसनीय माग पाएको छ। यसले काम गर्दछ:
- मृत कक्षहरू हटाउने;
- प्रभावकारी सफाई;
- पोर्टेको पोल;
- रंग को सुधार र सामान्य मा छाला को अवस्था।
यो अनन्य उत्पादन सबै छाला प्रकारका लागि उपयुक्त छ, विशेष गरी संयुक्त तथा तेल छालाको मालिकको नवीनता। सबै कस्मेटिक्स जस्तै, अनुहार र लाडो को लाश को उपस्थिति मा छीलने रोल को सावधानीपूर्वक प्रयोग गरिन्छ।
अधिकांश अवस्थामा, कोरियाई प्रसाधन सामग्री प्रस्ताव गर्ने सिद्धान्तहरू र तरिकाहरू बुझ्न कठिन छ। छान्ने-रोल कोसिस गर्ने केटीहरूको समीक्षा, नकारात्मक पनि छन्। यस्तो दु: खको मुख्य कारण गलत अनुप्रयोग हो।
हामी स्नानमा स्क्रब प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ र सोच्न चाहन्छौं कि कुनै आधारभूत फरक फरक छैन। बरु, छाती-रोल मात्र सुकेको छालामा काम गर्दछ। हामी यस लोकप्रिय नवीनता को आवेदन को विधि निर्दिष्ट गर्दछौं:
सुत्ने र सफा छालामा, हामी सानो मात्रामा रोलिंग गर्दै लाइट फ्याटलाइटिङ आंदोलनहरू।
हामी केही मिनेटमा एक पज छौँ।
आफ्नो अनुहार सुत्न को लागी सुत्न सुरु गर्नुहोस्। जेल छर्रों मा बदलिन्छ, जो धीरे अशुद्धता र मृत कोशिकाहरु लाई हटान गर्दछ।
अन्त्यमा हामी सबैलाई न्यानो पानीको साथ धोका दिन्छौं।
विशेष प्रशंसालाई पिलिङ-रोल छाला र प्रयोगशालाका डा.भिता क्लिनिक गेस भिता एक्फोलोलेंटलमा सम्मानित गरियो। एक नाजुक अंगूर गंध संग जेल मा, त्यहाँ साना granules छन्। जब लागू हुन्छ, तिनीहरू बल्कसँग फट्याउनुहोस् र मिश्रण गर्नुहोस्। रोलिंगको प्रक्रियामा, कणहरू अनुहारमा पर्दैन र व्यावहारिक रूपमा औंलाहरू बाँच्न सक्दैनन्।
हामीले पहिले नै भन्यौ भने, खुदरा पसलहरुमा कोरिया बाट प्रसाधन सामग्री किन्न असम्भव छ। प्रमुख रूसी शहरका बासिन्दाहरूले सजिलै लाभदायक खरिद गर्न सक्छन्, जुन घर वा अफिसमा पठाइएको छ।
यिम्बोक्स - एशियाई सुन्दरताको काम संग परिचित गर्न को लागी एक अद्वितीय अवसर। प्रत्येक बक्समा तपाईंले पाउनुहुनेछ:
- कस्मेटिक उत्पादनको एक वा दुई मिनी संस्करणहरू;
- दुई वा तीन पूर्ण आकारको उपकरणहरू;
- तीन देखि छ छ जांचहरु।
नाखून, बीबी-क्रीम, पेइङ नोसोकी र कोरियाली ब्रान्डका अन्य उपन्यासहरू को लागी वार्निश अपेक्षाकृत सानो मूल्यमा कोसिस गर्न सकिन्छ - त्यसैले तपाई आफैंको लागि सबैभन्दा उपयुक्त उत्पादन रोज्न सक्नुहुनेछ।
अनलाइन भण्डारमा कोरियाली प्रसाधन सामाग्री मिनिनेली केटीहरु र महिलाहरुको लागि उपलब्ध छन्। सूचीमा सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्डहरू छन्: मिजोन, मिस, गुप्त कुञ्जी, होलिकिका होलिका र छाला खाना।
भावी खरिद विशेषज्ञहरूका सौन्दर्य-शुरुआती निर्णय गर्न आफ्नो प्रतिक्रिया मद्दत गर्न सक्छ। कोरियाली कस्मेटिक, ताजा हावा को एक सास एक स्वस्थ अनुहारको रुप रंग radiance दिन र सानातिना कमियां राहत सक्षम। जब राम्ररी प्रयोग, पनि सबैभन्दा संवेदनशील छाला हानि छैन मात्र प्राकृतिक सामाग्री - साथै, एशियाली निर्माताहरु, त्यहाँ एक खास फाइदा छ।
Gommage (मुखौटा) - यो के छ?
सोलो लोभो - असाधारण पुरुषहरूको लागि असाधारण सुगन्ध
हेमीज इत्र - इत्र कला को क्लासिक
आँसुहरू खस्छन्, मैले के गर्नु पर्छ? कार्य गर्न।
एक श्यामला को लागि मेकअप: little tricks
मनोरंजक गणित। औसत
पक्षको बाहिरबाट घुट्नेमा दुखाइ: उपचार, कारणहरू
Oprichnik गर्ने हो? के भूमिका tsarist henchmen गर्छ?
घरेलू विशेषताहरु। उद्देश्य र नियम
रूसी संघ को संघीय संवैधानिक व्यवस्था
एक बच्चा2वर्ष मा छाडा मल: कारणहरू र उपचार
बैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन: एक जीवनी, सिद्धान्त र आविष्कारहरू। चार्ल्स डार्विन: छोटो जीवनी